sida badan aad u ogaato oo ku saabsan Spotify logo o
Qaybta 1.Spotify: guud
Qaybta 2.Logo: Taariikhda iyo-guurka
Part3.The New Aqoonsiga, la Colorizer
Qaybta 5.Can aan u isticmaalno Spotify Logo?
Brand A music, mid ka mid ah noociisa ah, isagoo taallo burbur ah oo in ka badan 30 milyan oo heeso iyo haysashada tiradaasi Rafaa ee 60 million users noqday dareen ah oo mawduuc laga wada hadlay waxaa ka mid ah taageerayaasha ay, sida ugu dhakhsaha badan waxay ogaadeen in isbedelka ku dhacay logo ah.
Spotify ma aha oo kaliya la geeyo music app sida Lugood ama wax kale, laakiin waxa uu fududeeyaa DRM oo la xidhiidha la keentay shirkadaha warbaahinta sida Sony, Warner Music Group, etc.Features Universal sida qaybsiga playlist iyo Radio, ururka dadka caanka ah sida Taylor iyo Wallach, iyo sahal in gaari users iyada oo Chine hooyo iyo macaamiisha mar walba lagu hayaa Spotify on top of xidhmooyin ah. Tani waxay keentay in la kordhiyo degdeg ah in tiro ka mid ah taageerayaasha iyo dhaleeceyn ugu danbeyn markii logo beddelmay.
2.Logo: Taariikhda iyo-guurka
Sannaddii 2013, Spotify bedelay logo sababo dhowr ah sida raadka saboolka ah, ka yar jiidasho leh, xayaysiin iwm logo hore kooban garoonka goobo cagaaran midab (la RGB qiimeeyo 180,211,75), la madow khadadka qalooca midab (oo wakiil ka mowjado dhawaaq ) waxa ay ka badan. By dhinaceeda, shirkada magaca 'Spotify' ku qoran font Proxima Nova. Logo Tani ma waxay ahayd in soo jiidasho leh oo uusan markii yeellay image ah laga soo amaahday ilo kale qaar ka mid ah. Company rumeysan yahay in ay tahay Dhuxul muusikada oo aan urur kasta oo farsamo oo ma Cudarada ay logo la image kasta. Oo sidaas ha loo baahan yahay logo ah taas oo abuuri kara eegno fiican oo ay dareemaan, marka saarayaa image ah oo caan ah sida Eminem ama wax kasta oo kale (oo hadda loo arki karaa mid aad si joogto ah).
3.Beerta New Aqoonsiga, la Colorizer
Saasuuna logo cusub la soo bandhigay ee suuqa, taas oo ku dhawaad ​​ahaa inversion ah mid hore, marka laga reebo in midabka cagaarka ah waxaa lagu bedelay hadh fududee waxaa ka mid ah.
Si kastaba ha ahaatee tani logo ee dhowaan la bilaabey ku guuldareystay in saara natiijada la rabay ka dibna hal-abuurka ah ka dhacay. Collins, logo ah kii sameeyey cusub fakarin boodhadh duotone. Images duotone ayaa waxay ahaayeen kuwo aad caan ka ah 1960, iyo in kastoo isagoo raqiis ah, viewed wanaagsan. Collin lahaa doonitaan ah in la isticmaalo fikraddan in improvisation ee Spotify logo. Sida naqshadeeye ah, Collin maleeyeen in nidaamada kala duwan midabka u logo kaas oo u dhigma laga yaabaa inuu la image asalka iyo ugu dambeyntii soo gabagabeeyey in midabka lahayn waa in lagu rakibaa u logo, halkii midabada waa in loo badalaa sida suuradda. Fikirkaani, in markooda dhashay software la odhan jiray "Colorizer The". Colorizer waxaa barnaamijkii u qalabaynta ah geedi socodka nidaamka midab kala xusho.
Habkan la beddelo logo ee image kasta oo la abuuray boodhadh fiican u xayeysiis iyo sumcad, laakiin heshiiska ayaa ka mid ah beddelo logo ee muhimka ah (inversion) lama mahad lagu dhaleeceeyay on qiyaasta weyn.
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala Spotify u bixiyey fal 'is-dambi', sida iyaga oo aan ka helay dood macquul ah siiyey shirkadda dhanka ah beddelo logo ah. Kuwo kale oo badan ayaa ku dooday in shirkada waa in ay diiradda lagu horumarinayo shaqeynta asaasiga ah, halkii ay faqri ku xijiyaan aan waxtar lahayn oo kale logo. Beddelidda of logo waa mid ka mid ah siyaabaha aad ku soo jiidan users iyo dib sheyga Korka ay fiiro. Shirkado badan ayaa inta badan isticmaala trick tan, laakiin waxa khaldamay la Spotify ahayd muddada gaaban, taas oo ay isku dayday this. Users sidoo kale tilmaamay ah ayna duleella u ah app isla muddadaas. Waxa la odhan karaa in wax xaq tageenba Spotify.
5.Can aan u isticmaalno Spotify Logo?
Si loo sameeyo alaabta ugu guulaha badan, Spotify oggol yahay saddexaad macaamiisha iyo adeegyada xisbiga. Ka dib markii tilmaamaha, cid saddexaad waa lacag la'aan si ay u sameeyaan codsiyada la macmalay, iyadoo la isticmaalayo muuqaalada Spotify, laakiin ilaa iyo haatan ka fiican tahay in ay app hooyo. Tusaale ahaan, codsiga soo bandhigay lyrics gabayga oo inta la ciyaaray waa la tixgelin karaa. Spotify cadeeyay in lacagta kaalmada ah ee laga daadiyo soo koraya waa in aan la dhaqmo sida xoriyadda ay u isticmaalaan logo shirkadda. Labada in tilmaamaha naqshadda iyo heshiis liisanka, shirkada ka dhigaysa in ay u istaagaan cad oo ku saabsan isticmaalka hantida aqooneed ee.
Logos, alaabooyinka, marks adeega, magacyada domain iwm hoos yaala qaybta ka mid ah hantida aqooneed ee qof walba ama urur kasta oo ku dhacaa. Waxay equivalently istaahila in sida wax la taaban karo hantida yihiin. Oo saas aawadeed waxaa ka jira siyaabo kala gaar ah u yahay ka hortagga xatooyada oo ka mid ah guryaha caqliga. Ama qoraa / qoraaga / naqshadeeye ka heli kartaa patent uu shaqada, ama Isagu wuxuu dhawri karaa xuquuqda ah. Mid ka mid ah habka ugu raqiisan ku sugan hantida aqooneed ee ay tahay in boostada dabooli oo ka kooban shaqadaada cinwaanka kuu gaar ah. Khatimaa by adeegyada boostada daliil siidaayay ee taariikhda oo halkan shaqadaada. Iyada oo mid ka mid ah habka kor ku xusan, hantida sida logo, summad iwm in lagu karaan.
> Resource > Spotify > Sidee badan oo ka taqaanaa Spotify Logo